कहिल्यै अन्तरिक्षमा छुट्टी मनाउने सपना देख्नुभयाको छ ? अन्तरिक्ष मा एक लक्जरी होटल खोल्दै – Krazy NepaL
November 6, 2020 830
अन्तरिक्ष मा एक लक्जरी होटल
कहिल्यै अन्तरिक्षमा छुट्टीको सपना देख्नुभयाको छ ? अरोरा स्टेशन, एक लक्जरी अन्तरिक्ष होटल, कम पृथ्वी कक्षामा यात्रुहरूको लागि भर्चुअल वास्तविकता र Wi-Fi को बयाब्स्ता गर्दछ – तर हामीले पर्खनु पर्छ र हेर्नु पर्छ स्टेशन साँच्चै उड्छ भने।
ओरियन स्पान भन्ने अन्तरिक्ष टेक्नोलोजी स्टार्टअपले भर्खरै यसको अरोड़ा स्टेशनको लागि योजनाहरू घोषणा गर्‍यो, २०२१ मा सुरू हुने र २०२२ सम्म पर्यटकहरूको आयोजना गर्ने आशा राख्दै छ । अरोड़ा स्टेशनमा यात्रा गरिरहेका आगन्तुकहरूले वाइफाइ, वजनहीनता, भर्चुअल वास्तविकताको आनन्द लिन सक्नेछन्।
हामीले अन्तरिक्षमा टर्नकी गन्तव्य प्रदान गर्न अरोरा स्टेशनको विकास गर्‍यौं,” फ्रान्क बन्गर, मुख्य कार्यकारी अधिकृत र ओरियन स्पानका संस्थापक, एक विज्ञप्तिमा भन्यो। “हाम्रो लक्ष्य भनेको कम लागतमा अधिक मूल्य ड्राइभ गर्न जारी राखेर सबैको लागि पहुँचयोग्य स्थान बनाउनु हो।” [अरोरा स्टेशन: चित्रहरूमा लक्जरी स्पेस होटल]अरोरा स्टेशनको लागि यात्रा $ .5 मिलियनबाट सुरु हुनेछ,
अरोरा स्टेशनले एक पटकमा छ जना व्यक्तिको मेज बानी गर्नेछ, दुई क्रूमेम्बर र चार पाहुना सहित, १२ दिनको अन्तरिक्षमा रहनको लागि रहने छ । स्टेशन पृथ्वीको सतह माथि २०० माईल (20२० किलोमिटर) मा उचाल्ने छ, प्रत्येक 90 ० मिनेटमा यसले ग्रहको वरिपरि एक यात्रा पूरा गर्दछ। यसको मतलब पाहुनाहरूले प्रत्येक दिन औसत १ सनराइज र सूर्यास्तहरू अनुभव गर्नेछन् र उनीहरूका गृह नगरहरू माथि उडान गर्ने मौका पाउनेछन्।
साथै पृथ्वी र अन्तरिक्षको अद्भुत दृश्यहरूको साथसाथ तिनीहरूसँग उत्तरी र दक्षिणी अउ पनि हेर्ने अवसर हुनेछ। र यात्रीहरूले शून्य गुरुत्वाकर्षणको अनुभव गर्नेछन् र स्टेशनमा स्वतन्त्र उडान गर्न सक्षम हुनेछन्। जुन उनीहरूलाई स्मृति चिन्हको रूपमा उनीहरूसँग घरमा लैजान सक्षम हुनेछन्।
यसबाहेक, अरोड़ा स्टेशनमा सञ्चालन गरिएका प्रयोगहरूले ज्ञान प्रदान गर्दछ जुन “ताराहरूमा मानवको भाग्यमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ,” ओरियन स्पानले भनेको छ। “उदाहरणका लागि, आफैंले खाना उब्जाउने आत्मनिर्भर स्पेस कालोनीहरूको कला भावी चन्द्रमा र मंगल ग्रहहरूमा र त्यसको पछाडि टाढासम्म दोहोरिने छ।”
पाहुनाहरू पनि सम्पर्कमा बस्न वा लाइभस्ट्रीममा पृथ्वीमा प्रियजनहरूसँग कुरा गर्न स्टेसनको उच्च-स्पीड, ताररहित इन्टरनेट प्रयोग गरी हुनेछ। पृथ्वीमा फर्कनेबित्तिकै उनीहरूले विशेष स्वागत गरिने छ|
Posted in बिज्ञान प्रबिधि, रोचक
Prevतुलसीको खेतीमा ४० हजार लगानी गर्दा तीन महिनामा नै ६ लाख आम्दामी तर कसरि ?
Nextखुशीको खबर : १२ लाख आप्रवासी क्यानडाले भित्र्याउने यसरी,लिन पाउनेछ अब नेपालीले पीआर
हास्यकलाकार मनोज गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर, आईसियुमा उपचार हुँदै